Mayelana ne-UAE | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
I-United Arab Emirates (i-UAE) kwathiwa ingumbuso ngomhlaka 2 Disemba, 1971, ngemuva kokubuswa yiBritish. I-UAE yakhiwa ama-Emirates ayi-7, okuyi-Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, noFujairah, no-Abu Dhabi okhethwe njengenhloko-dolobha.
Izizwe ezingomakhelwane zePersian Gulf.
umphakathi okhulayo we-expat
Iziphathimandla zikahulumeni we-UAE zifaka uMkhandlu Ophakeme we-UAE, okuyigunya lesisekelo sombuso eliphakeme ezweni lonke futhi elibandakanya ababusi bama-Emirates ayisikhombisa, uMongameli we-UAE, iPhini likaMongameli, uNdunankulu, uMkhandlu Kazwelonke Wobumbano, kanye ne-Federal Judiciary .
I-UAE itholakala engxenyeni esempumalanga yeNhlonhlo yase-Arabian, enweba kanye nengxenye ye-Gulf of Oman kanye nogu oluseningizimu yePersian Gulf. Ngasentshonalanga naseningizimu yezwe kukhona iSaudi Arabia, enyakatho yiQatar, kanti empumalanga kune-Oman. Izwe lihlanganisa cishe ama-82,880 km2, kanti i-Abu Dhabi iba ngamaphesenti angaphezu kwangu-87 ayo yonke indawo.
Le ndawo ekuqaleni yayihlalwa ngabathumbi basolwandle abaphendukela kumaSulumane ngekhulu lesi-7. Kodwa-ke, ngaphezu kweminyaka eminingana, ihlelo eliphikisayo elibizwa ngokuthi amaCarmeseans, lasungula iqembu elinamandla futhi lanqoba iMecca. Ngokuhlakazwa kwe-sheikdom, abantu bakhona baba ngamaphasi.
Amaphekula asabise iMuscat ne-Oman Sultanate ekuqaleni kwekhulu le-19, okwakhuthaza ukungenelela kwabaseBrithani okuphoqelela ukubusa okuyingxenye ngonyaka we-1820 kanye nenkambiso yaphakade ngo-1853. Ngakho-ke iPagate Coast yakudala yaqanjwa kabusha ngokuthi iTracial Coast. Lezi zifundazwe eziyisishiyagalombili zeTradokolo zivikelwe amaBritish, yize, azange ziphathwe njenge koloni.
Ngo-1971, iBrithani yahoxa ePersian Gulf, kanti amazwe amaTrucial aba yinhlangano ebizwa ngokuthi yi-United Arab Emirates (UAE). Kodwa-ke, iBahrain ne-Oman, izifundazwe ezimbili zeTrucial zenqaba ukujoyina umfelandawonye, ​​okwenza isibalo sezifundazwe eziyisikhombisa. Kwasayinwa isivumelwano sokuvikela amasosha ne-US ngonyaka we-1994 kanti esinye senziwa neFrance ngo-1995.
I-United Arab Emirates inesimo sezulu esishisayo nesinomswakama ogwini futhi sishisa futhi somile ngaphakathi. Imvula ifinyelela ku-4 kuya ku-6 amayintshi ngonyaka, yize lokhu kuyehluka ngonyaka. Ukushisa okujwayelekile kukaJanuwari kungama-18 ° C (64 ° F), kanti ngoJulayi, izinga lokushisa elijwayelekile lingama-33 ° C (91 ° F).
Ehlobo, izinga lokushisa lingafinyelela ku-46 ° C (115 ° F) ogwini futhi ngaphezulu kuka-49 ° C (120 ° F) noma ngaphezulu ogwadule. Imimoya eyaziwa ngokuthi yi-shamal maphakathi nenyakatho nasekuqalekeni kwehlobo ivela enyakatho nasenyakatho-ntshonalanga, ithwala isihlabathi nothuli.
I-UAE inesibalo sabantu bendawo ababekezelayo nabathandekayo, abazibophezele kakhulu kumasiko abo namasiko abo okudala. Lesi sakhamuzi sakha ingxenye eyodwa kwezishiyagalolunye yezakhamizi zase-Emirates. Abanye bonke bangabokufika kanye nabancike kubo, lapho abantu baseNingizimu Asia bakha amakhulu kunabo.
Ingxenye ebalulekile ihlanganisa nama-Arabhu aqhamuka kwamanye amazwe ngaphandle kwe-United Arab Emirates kanye ne-Iranian. Ezikhathini zamuva nje, abantu abaningi base-Southeast Asians, okubandakanya amaPhilippines bathuthele e-UAE ngobuningi babo bafuna amathuba omsebenzi ahlukahlukene.
Ingxenye enkulu yabantu igxile kakhulu emadolobheni agudle ulwandlekazi zombili, yize indawo yokuhlala engaphakathi kwe-Al- 'Ayn ikhule yaba yisikhungo esikhulu sabantu.
Amasiko amasiko e-UAE asekelwe ngokuqinile e-Islam futhi ahlangana nezwe elibanzi lama-Arabhu, ikakhulukazi namazwe angomakhelwane wePersian Gulf. Izwe lithintwe kakhulu ukuvuselelwa kabusha kwamaSulumane, yize amaSulumane e-Emirates engaqinile njengeSaudi Arabia. Naphezu kokuhlala emadolobheni kanye nomphakathi owanda wama-expat, ubunikazi bezizwe e-United Arab Emirates buhlale buqinile.
Umnotho we-UAE ngumnotho ophethwe ngophethiloli, okhiqizwa kakhulu i-Abu Dhabi Emirate. Inesinye sezindawo ezigxile kakhulu kwezokugcotshwa kwamafutha okufakazelwe emhlabeni, okunomthelela omkhulu kwisabelomali sikazwelonke.
Kodwa-ke, umnotho we-Emirate yase-Dubai ususelwe kakhulu ebhizinisini futhi ususelwa ku-oyili, yingakho usebenza njengezwe lokuhweba kanye nezezimali kuleliya lizwe futhi uholele izwe ekushintshanisweni kwezomnotho.
Ukukhiqizwa kwezolimo kususelwa kakhulu eRaʾs al-Khaymah nase-Al-Fujayrah Emirates. Kodwa-ke, lokho akunikeleli kakhulu kumkhiqizo wasekhaya omkhulu futhi sisebenzisa okungaphansi kwengxenye eyodwa kwabasebenzi.
IBurj Khalifa ingesinye sezakhiwo ezaziwa kakhulu e-United Arab Emirates futhi inesihloko sesakhiwo esikhulu kunazo zonke emhlabeni. Ayigcini nje ngokubamba lesi sihloko, kodwa futhi iyisakhiwo esidala kakhulu kunazo zonke emhlabeni, indawo yokubheka ephakeme kunayo yonke emhlabeni kanye neelifishi elihamba ibanga elide kakhulu emhlabeni. Kukubukwa kwephaneli ngaphesheya kwe-Emirate yase-Dubai nangale kwalokho okugqamile kokubona kwabavakashi abaningi abavakashela.
UJebel Jais uphakeme kakhulu e-United Arab Emirates futhi utholakala e-Emirate of Ras Al-Khaimah. Ngaphambili bekunzima ukufinyelela, kepha ngenxa yomgwaqo oshintshashintshayo oshintsha ujikeleze intaba, kube lula ukufinyelela kuwo eminyakeni yamuva.
ILouvre Abu Dhabi
ILouvre iyimyuziyamu emisha futhi ebabazekayo ye-UAE. Kuthatha izivakashi ngohambo lomlando wesintu ngezinto ezazithathwe kuwo wonke amagumbi omhlaba futhi kusukela eminyakeni ehlukene zibonisa ukuthi amasiko ahlukaniswa kanjani. Le mnyuziyamu ekhangayo inakho konke, kusukela emlandweni wakuqala kuya eminyakeni yobudala obukhulu nobuciko besimanje. Ubuciko bokwakha bamuva kakhulu namuhla.
Ngogu lolwandle olubanzi kangako, akumangazi ukuthi i-UAE inamabhishi amaningi amahle kangaka. Ezinye zalezi zifaka amabhishi amadolobha agudla ugu lwaseDubai ahlukaniswe imibhoshongo ephezulu yangemuva, amabhishi esihlabathi agolide agudla ugu olusogwini lwesiqhingi i-Abu Dhabi, kusukela e-Ajman kuya e-Emirate yaseFujairah.
Izinqumo azinakubalwa. Futhi, kukhona izihlabathi ezizimele zesihlabathi ezitholakala emahhotela amaningi okunethezeka eDubai nase-Abu Dhabi, angasetshenziswa ngabangewona izivakashi ngemali yosuku. Iningi lezindawo zokuhlala lihlinzeka ngemidlalo enamanzi njengokujula, ukushushuluza, ukudonsa umoya nokusukuma nge-paddleboarding.